China Industrial rim maka ọganihu inwego Tele njikwa China emeputa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Hygg
Kedu ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
Indozi ikpe eji otutu otutu uzo di iche iche dika ugbo elu, traktọ, kreenu, onye nlekota ndi ozo, ndi na-ebu azu, ndi na-acho ugbo ala wdg. rimuulu ulo oru ya mere o siri ike ịkesa ha. Mana imirikiti ha bụ usoro 1-PC na ogo dị n'okpuru sentimita 25. Kemgbe afọ 2017 HYWG malitere imepụtarim ulo oru n'ihi na ọtụtụ ndị ahịa anyị OE nwere ọchịchọ. Volvo Korea gwara HYWG ịzụliterimuulu ulo oru maka igwe na-egwupụta ihe na wiil. Otu Zhongce Rubber gwara HYWG ịzụliterimuulu ulo oru maka ọganihu. Ya mere na 2020 HYWG mepere ụlọ ọrụ ohuru na mpaghara Jiaozuo Henan iji lekwasị anya na mndozi ikpe producrion, ikike kwa afọ nke rim ulo oru Ezubere dị ka 300,000 rims kwa afọ. A na-agbakọta rimbe ụlọ ọrụ na ọ bụghị naanị taya pneumatic ọkọlọtọ kamakwa taya siri ike na polyurethane jupụtara na taya, ihe mkpuchi rim na taya na-adabere na ngwa ụgbọ. N'oge na-adịbeghị anya ọganihu na-ebuli elu na China nọ na-eto eto, HYWG azụlitewo ọtụtụ ihe mkpuchi maka ngwa ahịa na-ebuli elu.
Olee otú ọtụtụ ụdị nke ulo oru rim?
Ọrụ rimbụ mgbe 1-PC rim, na-akpọ otu-mpempe rim, na-mere si otu mpempe ígwè maka rim isi na ya e mere dị iche iche ụdị profaịlụ, 1-PC rim bụ ejikari size n'okpuru 25 sentimita asatọ, dị ka gwongworo rim the 1-PC rim bụ ìhè dị arọ, ọkụ dị arọ na nnukwu ọsọ, a na-ejikarị ya eme ihe n'ụgbọ ala ọkụ dị ka traktọ ugbo, ihe na-adọkpụ ụgbọala, onye na-ahụ maka ekwentị, onye na-agbazi ụkwụ, mbuli elu na ụdị ụzọ ndị ọzọ. Ibu nke 1-PC rim dị mfe.
Kedu ihe ejiri rụọ ọrụ?
Nke anyi rim ulo oru enwere ike iji ya maka ugbo ala dika:
(2) Ọganihu mbuli elu
(3) Azụ azụ azụ
(4) wiil excavator
(6) Ihe nhụchalụ
Rim nha Rdị rim Nha Taia Ngwaọrụ igwe
6.75 * 17.5 1-PC 225 / 50-17.5 Ọganihu mbuli elu
7.00T * 16-2PC 2-PC 9.00-16 Ọganihu mbuli elu
11X20 1-PC 315 / 55D20 Ọganihu mbuli elu
11X24 1-PC 36X14D610 Ọganihu mbuli elu
10X24 1-PC 33X12D610 Ọganihu mbuli elu
12X24 1-PC 385 / 65D24 Ọganihu mbuli elu
11.75X24.5 1-PC 355 / 55D625 Ọganihu mbuli elu
13X24.5 1-PC 15-625 Ọganihu mbuli elu
13X28 1-PC 385 / 45-28 Ọganihu mbuli elu
9.75X16.5 1-PC 26X12-16.5 Ọganihu mbuli elu
6.75x16.5 1-PC 240 / 55D17.5 Ọganihu mbuli elu
16.5 × 9.75 1-PC 12-16.5 General
16.5 × 8.25 1-PC 10-16.5 General
15X 13 1-PC 31 / 15.5-15 General
16JX17 1-PC 500 / 40-17 General
Anyị uru nke ulo oru rim?
(1) HYWG na-enye ọtụtụ rimuulu ulo oru karịsịa n'ihi na ọganihu akụrụngwa.
(2) HYWG ogo ka egosipụtara site na nnukwu OEM dị ka Volvo, JCB na Dingli.
(3) A na-ekwe nkwa HYWG site na njedebe ngwa ngwa na ihe siri ike, ọtụtụ nchara anyị na-eji bụ Q345B nke yiri S355 na Europe na A572 na USA.
(4) HYWG na-enye nnyefe ọsọ ọsọ na obere MOQ
Nke gara aga: Forklift rim maka Linde na BYD China OEM emeputa
Osote: OTR Rim components China OEM emeputa 25 ″ components